Masinina Siomay, milina famonoana mandeha ho azy - Fuxin
Isika nanao ny famoronana orinasa fitaovana sakafo amin'ny marika malaza. Isika no miezaka mankany izany tanjona ary koa hanatsarana ny milina tsara mba hahazo ny mpanjifa ny afa-po sy matoky. Tsy miandry fatratra miara-miasa amin 'ny mpanjifa sy ny namany an-trano sy tany ivelany. Mino mafy isika fa hisafidy antsika dia ny mifidy tsara.
FX-800D tsipika mandeha mandeha hatrany siomay / siomai / shu ...
Fitaovana automatique en ligne Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Double line line Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Mamatsy milina fanamboarana lozika
FX-910B Ovatra famokarana basy automatique FX-910B
Izahay dia mpamokatra matihanina mampiditra ny R & D, ny fanamboarana, ny varotra ary ny serivisy aorian'ny varotra.
Ny orinasanay dia manana fitaovana fanodinana lehibe maro.
Hatramin'ny nananganana ny orinasa, namidy manerana ny firenena ny vokatra dia aondrana any ivelany, ary efa nankatoavina sy nidera ireo mpanjifa. Mino foana izahay fa "ny kalitao no fototry ny fampandrosoana ny orinasa, ary ny tsy fivadihana no hery manosika amin'ny fampandrosoana ny orinasa". Raha mahaliana anao ianao dia tongasoa am-pahatsorana ny fanontanianao.
Ningbo Jiangbei Fuxin Sakafo milina Co., Ltd
nifanizina soanambo Bun Machine , soanambo nifanizina Bun Manao Machine , Automatic soanambo nifanizina Bun Machine , Pan-Fried soanambo nifanizina Bun Machine , soanambo nifanizina Bun Machine , Household soanambo nifanizina Bun Machine , rehetra Products